Lego Harry Potter 75979 Hedwig ပြန်လည်သုံးသပ်မှု
24 / 08 / 2020 23 / 09 / 2020 ရော့ Paton 1380 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၅၉၇၉ Hedwig, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်တစ်ဝက်-သွေးမင်းသား, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်
အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံကစားရန်ဆောင်ခဲ့ရမည် Lego, ၇၅၉၇၉ Hedwig များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အလားအလာကိုကိုယ်စားပြုတယ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ရှေ့ဆက်ရွေ့လျား။
စံပြ ၀ င်းအတွင်းသို့တည်ဆောက်ထားသောလီဗာကို ဦး စွာလှည့်ကြည့်ပါကဖြူဖြူဇီးကောင်၏အတောင်များသည်သတ္တဝါ၏ရင်ဘတ်မှ စတင်၍ တောင်ပံတစ်ခုစီ၏အစွန်အဖျားအထိရွေ့လျားသွားသည်နှင့်ဖြူဖြူဖြူကောင်၏အတောင်များသည်တဖြည်းဖြည်းမြှင့်လိုက်သည်နှင့် သူတို့ရဲ့ဆွဲငင်အားအောက်မှာပြန်ဆင်းမလာခင်သဘာဝမဟာကိုရောက်ရှိနေပြီ၊ မင်းမှာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် ၇၅၉၇၉ Hedwig.
theme: Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၅၉၇၉ Hedwig ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1
စျေးနှုန်း: £ 34.99 / $ 39.99 / € 39.99 အပိုင်းပိုင်း: 630 အသေးစားပုံများ: 1
၎င်းသည်ရိုးရှင်း။ ရှုပ်ထွေးသောအပေါ်နှင့်အောက်သို့လှုပ်ခြင်းရွေ့လျားမှုဖြစ်နိုင်သည့်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည် ၇၅၉၇၉ Hedwigကျွန်ုပ်တို့မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည့်ငှက်တောင်ပံလှုပ်ရှားမှု၏အရှိဆုံးနှင့်မှန်ကန်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည် Lego.
ဤသည်သည်ဖမ်းယူနိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှု၏ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ ဇီးကွက်၏အတောင်ပံတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သန်း။ ပြုလုပ်သောပျံသန်းသည့်ယန္တရားသည်မည်မျှပြီးပြည့်စုံသည်ကိုဖော်ပြသည်။ ၇၅၉၇၉ Hedwig ခံစားမှုနည်းနည်းက play function လိုခံစားရတယ်၊ ပြီးတော့ set ရဲ့ raison d'êtreတစ်ခုလုံးနှင့်ပိုတူသည်။
အမှန်စင်စစ်, တည်ဆောက်တစ်ဝှမ်းဗဟိုပြုနေသည် နည်းပညာ- ခြေထောက်ရိုးတံမှတဆင့်နှင့်ဇီးကွက်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိလီဗာများနှင့်ဂီယာများ၏အတွင်းပိုင်းကိုအခြေခံထားသဖြင့်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်သေးငယ်သည့်အရေအတွက်နှင့်တူသည်ဆိုသော်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလှုပ်ရှားမှုနှင့်လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုအင်အားရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းဝန်းကျင်တွင်ဆောက်လုပ်ထားသောဇီးကွက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပါ။
ဒါကအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံသည်အဓိကအကြောင်းအရာ၏ဆွဲဆောင်နိုင်မှုကိုပြသသည် - အချို့သောအမှန်တကယ်ကြီးမားသောအသေးစားရုပ်ပုံများကိုတင်စဉ် - အရာအသစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာဖြင့်စမ်းသပ်ရန်။ ၇၅၉၇၉ Hedwig ကြောင်းဖန်တီးမှု ဦး တည်ချက်၏ယုဂျနှင့်လိုက်နာရန်ဖြစ်နိုင်သည်အခြားအစုံဆန့်ကျင်ကျင်းပလိမ့်မည်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပြသရန်အတွက်ဤအစုသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဟေးဝစ်ဇီးကွက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်အတောင်များ၏ထောင့်မှစ၊artတစ်လှည့်ကွက် -shaped ခေါင်းကို၏ icular ပုံ။ ဦး ခေါင်း၏အချိုးအစားများသည်သေတ္တာပေါ်တွင်သူတို့ပေါ်လာပုံကိုသင်အံ့အားသင့်စေနိုင်သည် art ၎င်းတို့သည်အစစ်အမှန်ဘ ၀ တွင်မည်သို့မည်ပုံပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုတဆင့်ကြည့်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်ကချိန်ညှိပြီးရုပ်ရှင်ကားမှလက်တွေ့ဘ ၀ အရင်းအမြစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင်သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့် ပို၍ သင့်လျော်သည်ဟုခံစားရသည်။
အဆိုပါအစုတစ်ခုသီးသန့် minifigure နှင့်အတူပါရှိသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ပထမနှစ်တွင်အပြာရောင်လက်အိတ်နှင့်ပြည့်စုံပါ။ ၎င်းသည်အသက်ရှင်ခဲ့သောကောင်လေး၏အသွင်အပြင်ကိုအစက်အပြောက်အပန်းဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Philosopher's Stone သည်ဤမော်ဒယ်တွင်ပါ ၀ င်ရမည့်အံဝင်ဂွင်ကျဆုံးသောဗားရှင်းဖြစ်ပြီး၎င်းနှစ်ခုကိုမြင်ကွင်းတွင်အများဆုံးတွေ့ရခြင်းအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူက Hedwig အတွက် minifigure စကေးအသစ်ပုံသဏ္newာန်လည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ သူတို့အတွက်သေးငယ်တဲ့ရပ်တည်ချက်တစ်ခုပါပြီးအဓိကမော်ဒယ်ရဲ့ရှေ့ဘက်ကိုပါဆက်သွယ်နိူင်ပါတယ်။
စျေးနှုန်းကိုစဉ်းစားခြင်းကကစားခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းပိုမိုပြောရန်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်တောင်ပံများကိုအထက်သို့ရွေ့လျားစေရုံသာမကဘဲဇီးကွက်၏လှုပ်ရှားမှုကိုပြည့်ဝစွာတုပသည့်အနေဖြင့်၎င်းသည်ရင်ဘတ်ကိုဆွဲ တင်၍ ကျောကုန်းတလျှောက်ရွေ့လျားခြင်းမှတစ်ဆင့်တောင်ပံများ၏အစွန်အဖျားများမတိုင်မီအထိဖြစ်သည်။ အတောင်ပံများသည်ပုံသဏ္shapeာန်ပုံသဏ္reachာန်သို့ရောက်ရှိပြီးပြန်လည်ကျဆင်းသွားသည်။
e ရှိတယ်xtra authenti အဆင့်city သို့ ၇၅၉၇၉ Hedwig ဒီပြဇာတ် function ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်၊ ပေါင် ၃၄.၉၉ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောပျံသန်းနေသော Hedwig မော်ဒယ်၏ပုံစံကိုတည်ဆောက်ရန်သင်စိတ်ကူးတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ပျံသန်းနိုင်သော Hedwig မော်ဒယ်၏စံပြပုံစံသည်မည်သို့မည်ပုံအလုပ်လုပ်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်၎င်းသည်အထက်တွင်သာမကကျော်လွန်သွားသောရှေ့ပြေးရှေ့တွင်ထိုင်။ ပျံသန်းနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် gimmick ဖြစ်နိုင်သည့်အရာသည်အစားထိုး။ လိမ္မာပါးနပ်စွာတီထွင်ထားသောဥာဏ်ရည်ရှိသည် Lego ယင်း၏အဓိကကစားခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၊ Lego ရှေ့မှာလာကြပြီစုံ။ ၎င်းသည်ပြသမှုတွင်ကောင်းမွန်သော်လည်း၎င်းသည်သင်ရှည်လျားလွန်း။ မကျန်ရစ်နိုင်သည့်အစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောသဘောသဘာဝသည်၎င်းလီဗာကိုလှည့်ပြီး Hedwig ယင်ကောင်ကိုမြင်တွေ့ရခြင်း၏သဘောသဘာဝဖြစ်သည်။
သင်အထူးဆောက်လုပ်ထားပြီးပြီဆိုတာသင်သိတယ် Lego သင်နောက်မှပြုံးသောအခါ startနောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားပါ ဦး ။ ဒီဟာ st လားart ကနေကာတွန်းသတ္တဝါများတစ်ခုလုံးလိုင်း၏ ဟယ်ရီပေါ်တာ? သူတို့ကဘယ်လို Crookshanks, ဒါမှမဟုတ် Scabbers, ဒါမှမဟုတ် Nagini ဖန်တီးမလဲ ဒီဟာကအတွင်းပိုင်းတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်အစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုအသစ်တွေနဲ့လုံးဝမတူတော့သလိုခံစားမှုကိုနည်းနည်းထူးခြားစေတဲ့နည်းနဲ့သင်ကိုအမှန်တကယ်ဆန်းသစ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသင်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်ပေးသည်။
စွန့်စားမှုများယူပြီးအသစ်သောအရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုသဘောမျိုးကိုပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ချက်များထက် ကျော်လွန်၍ စံပြပုံစံဖြင့်ကစားခြင်းအားဖြင့်၊ ၇၅၉၇၉ Hedwig ထူးခြားသည် Lego 2020 ခုနှစ်တွင်သတ်မှတ်ထားနှင့်အများဆုံးဆက်ဆက်အပေါ်ထွက်လက်လွတ်မ။ အဲဒါကြောင့်ငါတို့၌ရှိ၏အကြောင်းပြချက်ရှိခဲ့သိတယ် ထိပ်ဆုံး LEGO သတ်မှတ်ချက် 20 စာရင်း...
၇၅၉၇၉ Hedwig မှာမှာယခုရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley minifigures ဖော်ပြခဲ့သည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ရောင်စုံနံရံ →